Homeसमाचारदाङमा पक्रा`उ परेका यी महिला जसलाई धनि र राम्रा युवक त देख्न नै हुन्थेंन…
October 26, 2021 admin समाचार 2434
हाइप्रोफाईल व्यक्तिलाई दाङको घोराही उप–महानगरपालिका स्थित होटलमा बोलाएर ‘बा’र्गेनि’ङ’ गर्ने ३ जना महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
कर णीको उ’जुरी दिन्छु भनेर ध’ ‘म्की दिई एक पुरुषसँग ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको आ’रोपमा तीन जना महिलालाई दाङमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनीहरुले बि’य’र र मा’ ‘सु खाँदै गफ गरेका थिए । होटलबाट हिँड्ने बेलामा भद्र बहादुर शौचालय गए । फर्किँदा सितादेवी थापा ओ’छया’नमा प’ल्टि’रहेकी थिइन् ।
भद्रबहादुरले सितादेवीलाई उठाउन खोज्दा उनले गा’ ‘ली गर्न था’लिन् । खुमा ओलीले फोटो खिचिन् । सितादेवीले गा’ ‘ली गरिन्–‘मेरो ई’ज्ज’तमा हा’त हा’ल्ने, कर’ णी’को मुद्दा हाल्छु ।’ भनी वा’दविवा’द भएको प्रहरीले बताएको छ ।
सितादेवीको स’मूहले यसअघि पनि ‘पैसावाल’लाई ह’नी ट्र’यापमा पारेर अ’सुल्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । २०७७ मा उनिहरुले तिनजनासँग त्यसैगरी ४३ लाख, ३८ लाख र ३५ लाख ‘बा’र्गेनि’ङ’ गरेर असुलेका थिए ।
‘सो स’मूहको पेशा नै बा’र्गेनि’ङ गर्नेखालको देखिन्छ’ एसपी काफ्ले भन्छन्–‘आ’परा’धिक लाभ लिन नहुने कसुरमा म्याद लिएर थप अनुसन्धान गरिररहेका छौं ।’
पी’डितको उजुरीका आधारमा प्रहरीले थापाको कोठामा खा’नत’ला’सी गर्दा १७ लाख रुपैयाँको चेक भेटेको छ भने नगद १ लाख भने ब्याजमा लगाइसकेको पाइएको प्र`हरी प्रवक्ता रिजालको भनाई छ ।
February 15, 2021 admin समाचार 4617
April 11, 2021 admin समाचार 3769
September 22, 2020 admin समाचार 10457
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209080)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194997)